Ungavimba njani iTelegram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uvimba njani kwiTelegram?
Epreli 26, 2021 0 IiCententarios 290
KwiTelegram unokhetho lokuvimba kunye nokuthintelwa. Namhlanje sikuzisa inkcazo eneenkcukacha ngamanyathelo omele ukuwalandela xa ufuna ukuvimba omnye wabafowunelwa bakho. Singakuxelela ukuba inkqubo iyakhawuleza kwaye ilula.
Ngokuqinisekileyo isicelo esidumileyo sokuthumela imiyalezo ayikhuphi naluphi na uhlobo lwesilumkiso xa sibhlokiwe ngomnye umntu, kodwa ke zikhona iindlela zokufumanisa. Ke khululeka kwaye ufunde ukubhloka kwiTelegram kwaye wazi ukuba uvinjwe ngomnye umsebenzisi.
Yazi ukuba uvinjiwe
¿Ungathanda ukwazi ukuba uvaliwe kwiTelegram? Ewe, sineendaba ezibalaseleyo kuwe, kwaye ngoku kunokwenzeka ukuba ufumanise xa siye savalwa ngabanye bethu.
Eyona ndlela ilula yokwazi ukuba umsebenzisi usivalile mbuze ngqo kulo mntu, kodwa kwenzeka ntoni xa singathembanga? Kukho ezinye iindlela zokufumanisa.
Izicelo ezifumanisa ukungqubana
Itekhnoloji ayiyeki ukusothusa kwaye ngoku khuphela ezinye iiapps Singafumanisa ukuba sivaliwe kwiTelegram, nangona inyaniso kukuba ezi ntlobo zezicelo azizalisekisi okuninzi zikuthembisayo.
Kukho izicelo ezilungele olu hlobo lwesenzo, kodwa uninzi lusebenzisa kuphela "uxinzelelo" lwabasebenzisi ukwazisa malware kwizixhobo eziphathwayo. Kungcono ukunqanda ukuzikhuphela.
Kodwa ungakhathazeki, ziyaqhubeka ukubakho ezinye iindlela zokufumanisa xa siye savalwa ngomnye umsebenzisi weTelegram.
Awuboni xa idibanisa
¿Awuwuboni umhla wokugqibela woqhagamshelo lomntu? Masikuxelele ukuba inokuba ikuthintele. Kodwa lumka, oko akuthethi ukuba lonke ixesha. Kungenzeka ukuba ulwenzile ngaphandle unxibelelwano kunye nexesha lokugqibela, kwaye kwezo meko ngekhe ukwazi ukubona oko kwabanye.
Awuboni umfanekiso wakhe weprofayili
Uphawu lokuba uvinjiwe ngumntu kwiTelegram yile awukwazi ukubona umfanekiso wakhe weprofayili, nangona oko akuthethi loo nto. Kungenzeka kwakhona ukuba loo mntu uyicimile ifoto yakhe kwaye yiyo loo nto ungayiboni.
Unokuzama nokubhalela loo mntu le ayikrokrelayo ukuvimbile. Into eqhelekileyo kukuba iitsheki ezimbini ziyavela kwiscreen oko kuthetha ukuba umyalezo wethu uthunyelwe kwaye ufunyenwe, kodwa ukuba itsheki enye iyavela, umyalezo wethu awuzange ufike.
Batsho apho ukuba kuya kufuneka uhlawule ngemali enye, ucinga ntoni? KwiTelegram unakho ukuvimba. Ukuba umntu ukuvimbile, ungabuyisa kwa loo nto. Ukwenza njalo, kuya kufuneka ulandele la manyathelo alandelayo sikuxelela apha ngezantsi:
Okokuqala kufuneka vula usetyenziso lweTelegram
Toca Kwincoko yomsebenzisi ofuna ukumvimba
Emva koko cinezela phezulu kwesikrini, kanye apho igama lomfowunelwa livela khona.
Iya kutyhileka ngokuzenzekelayo lonke ulwazi
Kufuneka Chukumisa amanqaku amathathu ezibonakala kwikona ephezulu ngasekunene
Apho uya kubona ukhetho "Vimba”. Cinezela nje uhambe.
1 Yazi ukuba uvinjiwe
2 Izicelo ezifumanisa ukungqubana
3 Awuboni xa idibanisa
4 Awuboni umfanekiso wakhe weprofayili
5 Imiyalezo ayifiki
Indlela yokuhlola iTelegram?